Pakistana : Mihetsika ny foko vitsy an’isataorian’ny fahafatesan’ny minisitry ny foko vitsy an’isa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, Français, 繁體中文, 简体中文, English
Tonga nanao sonia ny fangatahana nalefa taorian-ny famonoana an'i Shahbaz Bhatti ireo olona, tao Karachi. Sarin-i Abro Khudabuksh
Ny 2 martsa 2011 , andian'olona tsy fantatra mitam-piadiana no nitifitra sy namono ny Minisitra federaly Shahbaz Bhatti misahana ny foko vitsy an'isa ao Pakistana. Nandositra ireo namono azy rehefa navelan'izy ireo teo akaikin'ny vata-mangatsiaka loadoky ny bala ny taratasy manamarina ny fahafatesany. Famonoan'olona ambony faharoa ity nitranga ity, taorian'ny goverinora Salman Taseer tamin'ny 4 janoary lasa teo. Shahbaz Bhatti no mpikambana tokana mpino kristianina tao amin'ny governemanta, ary toy ny fahavoazana mavesatra ny fahafatesany, tsy ho an'ny mpino vitsy an'isa ihany, fa ho an'ny firenena iray manontolo. Tamin'ny fanambarana ny fahafatesany, dia naneho ny fahatezerany sy ny alahelony ireo Pakistaney mampiasa Twitter.
Izaho ihany koa dia nitantara ny fihetseham-po voalohany tao amin'ny bilaogiko Gawaahi.com ary nampirisika ny vahoaka mba hitsangana hanohitra ny herisetra.
“Tsy misy fanantenana ho an'i Pakistana”
“Mandria ampiadanana i Pakistan”
“Lasan'ny “alika” ny firenena”
Mandria ampiadanana Pakistana. Izany no hafatra voalohany novakiako tamin'ny atoandro teo tao amin'ny Twitter. Tsy nijanona ela teo aho fa mba nijery ireo tweets teo aloha ihany koa mba ahafantarako ny zava-miseho mampahonena. Shahbaz Bhatti, minisitra pakistaney misahana ny vitsy an'isa sy solontena kristianina tokana ao amin'ny governemanta no nisy namono. Fahagagana, mahatsiravina, mampatahotra, sarotra no hilaza izay niseho voalohany tamin'ireo fihetseham-po ireo.
Mieritreritra i Kalsoom Lakhani ao amin'ny bilaoginy Changing Up Pakistan fa zava-niseho mampalahelo izay tsy izy ny fahafatesany, zava-dratsy ho an'ireo izay miezaka miasa mafy amin-kerimpo ao amin'ny firenena. Ny bilaogera Ahsan Butt koa dia naneho ny fahadisoam-panantenany manoloana ny vono-olona, izay tsy mba nanambara zavatra tsara amin'ny hoavy eo imason'ireo Pakistaney marobe.
Mbola mionona hatrany hatrany aho ny amin'ny hoe mety tara loatra raha hanova zavatra amin'ny fikorontanana manjaka ao Pakistan. Tsy manambara izay mety ho tsy fahombiazan'ny Fanjakana aho ; mino aho anefa fa mbola haharitra ela ny Fanjakana. Mahatsiaro ity tenin'i ‘Adam Smith ity ve ianao milaza hoe “fifanarahana goavan'ny fandravana ao amin'ny firenena”?
Araka izany, tsy miresaka momba ny fianjeran'ny Fanjakana aho. Fa milaza ny endriky ny fitondrana sy ny fiarahamonina –miharomotra hatrany – fa tahaka ny misy ozona izany isak'izay hanao zavatra isika tsy hahafahana manao na inona na inona.
Salman Taseer sy i Shahbaz Bhatti dia samy novonoina noho ny fepetra noraisiny mikasika ny lalàna momba ny fitenenan-dratsy. Midika izany, fa ireo fihetseham-po tamin'ny fahafatesan'i Shahbaz Bhatti dia tsy mitovy tamin'izay niseho tamin'ny fahafatesan'i Salman Taseer –tsy nisy ny fanomezam-boninahitra nasionaly. Lahatsoratra nalefa an-tserasera tamin'ny bilaogin'i Cafe Pyala no mampiseho ny fitomboan'ny fanamarinana ireo asa famonoan'olona amin'ny anaran'ny finoana.
Amiko manokana, tsy manaiky ireo lehilahy, vehivavy na tanora izay miezaka manova ny adihevitra aho amin'ny hoe mendrika fahafatesana ve ny tsy fitovian-kevitra.
Ao amin'ny bilaoginy, niantso ireo Pakistaney i Mosharraf Zaidmba mba hampihena ny adilahy politikan'izy ireo sy hiombon'alahelo amin'ny fanomezam-boninahitra ny fahalasan'i Bhatti. Ho an'ilay bilaogera Yasir Lateef Hamdani, mitantara an'ii Pakistana taorian'i Bathi ao amin'ny ideological crossroads. Eo afovoan'ny aizina sy ny fahadisoam-panantenana, misy vehivahy misongadina roa, Naveen Naqvi sy i Beena Sarwar, miresaka momba ny herim-po sy ny fahasahiana.
Tao amin'ny bilaoginy, nandefa sombiny tamin'ny heviny i Naveen momba ny fahafatesan'i Bhatti izay mitondra ny lohateny hoe Ny fahanginanao dia mety hampirisika famonoan'olona hafa indray :
Azafady, tohano aho. Aza mihevitra hoe tsy misy dikany izany. Mifanohitra amin'izany. misy ireo zava-niseho taloha ka tokony hanana faharisihana hamorona zava-baovao toy izany indray isika , koa averiko aminao, fa tsy hisy zavatra tokony hitoloman-tsika intsony. Mangataka aminao aho mba hiaraka amiko amin'ny 12 martsa. Tongava manao sonia ny taratasy manohitra ny tsy fifandeferana amin'ny finoana izay omena ny governemanta sy ny fitsarana, ny Asabotsy 12 marsa amin'ny 11 ora hatramin'ny 7 ora. Manantena ny hahita anareo aho amin'io fotoana io.
Namonjy ny fotoam-bavaka fahatsiarovana an'i Shahbaz Bhatti izay nokarakarain'ny katédraly Saint-Patrick de Karachi koa i Naveen Naqvi ka nandefa ireo sary tao tamin'ny alalan'ny aterineto. Ny mpitolona amin'ny fiarovana ny zon'olombelona Beena Sarwar koa dia namoaka tamin'ny mailaka nifampizarana tamin'ny mpanao gazety Kanadiana Gwynne Dyer mba hanoherana ny hevitra fa ny vono-olona dia tsy niteraka afa tsy ny fahanginan'ny maty. Nahangona vahoaka miisa 15 000 amin'ny sokajin-taona samihafa ny fanentanana hanao sonia , araka ny nolazain'i Naqvi ao amin'ny bilaoginy. Lahatsarin'ny zava-niseho, nataon'i Sabeen Mehmud, dia mampiseho fa tonga maro ny vahoaka.
Na dia teo aza ny fahombiazana lehibe tamin'ny fanapahan-kevitra, maro ireo nitsikera sy nametraka fanontaniana mba hahafantatra raha afaka manampy amin'ny fitadiavana vahaolana ao Pakistana marina ilay fangatahana natao. Ao amin'ny bilaogiko manokana, niezaka nanome lanjany io fisainana be ahiahy io aho :
Tsy azo ihodivirana ny tsikera. Eto, dia mikasika ny hoe mety hamaha ny olana sarotra ve ny fangatahana natao. Marina fa tsy ny fangatahana irery ihany no vahaolona tokana. Fa kosa zavatra tsara natomboka mba hanaovana hetsika goavana manerana ny firenena. Ireo olona 15 000 no nameno ny vaovao sy ny sary rehetra. Tsy mikasika intsony ny adihevitra amin'ny “liberaly” sy ny “conservateur” ity, fa Pakistana manao sonia amin'ny fanoherana ny herisetra sy ny fampitahorana. Famantarana lehibe izany satria mifanohitra ireo hevitra voaray, dia tsy vahoaka mandalo fotsiny isika. Ny fomba fampitahorana dia tsy voatohitra raha tsy amin'ny herim-po ihany.